Ciidanka Ukraine oo weerar celis ka bilaabay goobaha qaarkood | Arrimaha Bulshada
Home English News News Ciidanka Ukraine oo weerar celis ka bilaabay goobaha qaarkood
Ciidanka Ukraine oo weerar celis ka bilaabay goobaha qaarkood
Bulsha:- Ciidamada Ukraine ayaa Sabtidii maanta bilaabay weerar celis, meel u dhow magaalada ay ciidanka Ruushku haystaan ee Izium ee Woqooyibari Ukraine, sida laga soo xigtay guddoomiye gobol. Ukraine ayaa doonayasa in Ruushka ay dib uga riixdo goobaha istaraatiijiga ah, ciidamadaas oo hareereeyey kuwa Ukraine ee aagga bari ee gobolka Donbas.
Ciidanka Ruushka ayaa culeyska saaraya gobolka Donbas, ka dib markii ay ku guul-darreysteen inay qabsadaan magaalada xarunta dalka ah ee Kyiv markii uu dagaalku bilowga ahaa. Hase yeeshee, Ukraine ayaa dib ula wareegtay goobo deegaankaas ku yaalla oo ay ku jirto magaalada labaad ee ugu weyn dalka ee Kharkiv.
Machadka Institutue for the Study of War oo ku yaalla magaalada Washington ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in Ukraine “ay u muuqato inay ku guuleysatay dagaalkii Kharkiv. Waxa machadku intaas ku daray in “ciidanka Ukraine ay ka horjoogsadeen in Ruushku uu Kharkiv hareereeyo iska daaye uu iyada la wareego, ka dibna uu ciidanaka Ukraine kuwa Ruushka ka eryey magaalada, si la mid ah sidii ay uga horjoogsadeen magaalada Kyiv.”
Dagaal qaraar ayaa sidoo kale ka dhacay wabiga Seiversky Donets oo u dhow magaalada Severodonestk. Guddoomiyaha gobolka eastern Luhansk, Serhiy, Gaidai ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ayaa dib u celiyeen kuwa Ruushka ee isku dayey in ay wabiga ka soo gudbaan, magaaladana ay hareereeyaan. Hase yeehee, Oleh Zhdanov oo ah falanqeeye madaxbanaan ee arrimaha Ukraine ayaa sheegayin Ukraine ay ku guul-darreysatay in horjoogsato horumarkii uu Ruushku sameynayey.
Labada dhinac ayaa u muuqda in midkoodna aanu horumar weyn ka sameyneyn dagaalka hadda socda.